चोरले म चोर हूं कहिल्यै भन्दैन। हिजो आज माओबादीले गरिरहेका क्रियाकलाप ले के भन्छ? यो त केटाकेटीले पनि बुझ्ने कुरो हो। जे मा पनि, जता पनि उनीहरु आफ्नै हालीमुली गर्ने र अरुलाइ पाइला सम्म टेक्न नदिन हरदम प्रयास गर्छन। अत: माओबादीको चाहना नै अधिनायकबाद हो, यसमा कुनै शंका लिनुपर्ने कारण नै छैन।
सबभन्दा हांसो लाग्ने त बामपन्थी बुद्दीजिबि को हो, भन्न चांही स्वतन्त्र बामपन्थी बुद्दीजिबी भन्छन काम भने कुनै पार्टीको भजन गाउने। नामै के दिनु,तपाइहरुले भेउपाइ सक्नुभो होला।
manu ji le bhannu bhayeko kura mali pani ramro lagyo aphno jiuko jumra nadekhnele aruko jiuko ........... dekhne bhaner ysailai bhan6an
माओवादीले हतियार बिसाएको र सेना समायोजन र पुनर्स्थापना प्रकृयामा लागिसकेकै छ नि । अनि यो केको रडाको हो ? यस्तो रुवाइ कति प्रस्तुत गर्नुहुन्छ ? सेनाको लोकतान्त्रीकरणचाहिँ अत्यावश्यक र अवश्यम्भावी छ; अन्यथा छोटे राजाहरूको कर्तूतले बडेराजाहरूलाई माथ ख्वाउनेछ । बरु यसतर्फ कलम चलाउने कि एकलव्यजी !
अनि यो लोकतन्त्रको पाठ कसलाई पढाउनुभएको हो कुन्नि ? इन्द्रका अगाडि स्वर्गको बयान ! मलाई त कुरिकुरि पो लाग्यो त ।